Madaxweynaha la doortay ee Soomaaliya oo kulan la qaatay danjireyaal ka socda beesha caalamka - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMadaxweynaha la doortay ee Soomaaliya oo kulan la qaatay danjireyaal ka socda beesha caalamka
February 9, 2017 Puntland Mirror Somalia 0
Madaxweynaha la doortay ee Soomaaliya oo kulan la qaatay danjireyaal ka socda beesha caalamka. [Sawirka: Twitter]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha la doortay ee dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta oo Khamiis ah kulan kula yeeshay gudaha magaalada Muqdisho safiiro ka socda beesha caalamka oo uu hoggaaminayo danjiraha Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya Michael Keating.
Safiirada ayaa madaxweynaha la doortay gaarsiiyay dhambaalo hambalyo ah oo ay ka wadeen dalalkooda, iyaga oo balanqaaday in ay la shaqayn doonaan madaxweynaha.
Farmaajo ayaa shalay oo Arbaco ahayd waxaa loo doortay madaxweynaha cusub ee dalka.
Maalmaha soo socda ayaa la filayaa in uu la wareego xafiiska Villa Soomaaliya.